mars 2021 – Ministère de la Jeunesse et des Sports
« Mamboly hazo tia tanindrazana ».
Ny sehatry ny tontolo iainana no niompanan’ny fihaonan’i Rtoa Juliana Ratovoson, Tale Jeneraly misahana ny Tanora sy Atoa Léonard Emile OGNIMBA izay Ambasadaoron’ny OIF(Organisation Internationale de la Francophonie) eto Madagasikara.
Nanatanteraka valan- dresaka ho an’ny mpanao gazety ny Minisitry ny Tanora sy ny Fanatajahantena TINOKA Roberto androany Alahady 21 Mars 2021 ho fampahafantarana ny zava-misy mahakasika ny BAREA sy ny fandraisan’i Madagasikara anjara amin’ny lalao fifanintsanana CAN 2022, mba tsy ho tompon-trano mihono ny vahoaka malagasy.
Niaraka taminy tamin’izany ny avy ao amin’ny Federasiona Malagasin’ny Baolina kitra sy ny mpanazatra Nicolas Dupuis.
Nosafidiana hifanindran-dalana tamin’ny taom-baovao Malagasy ny nanatanterahan’ireo tale isan-tsokajiny eo anivon’ny Ministeran’ ny Tanora sy ny Fanatanjahantena ny fiarahabana an’Andriamatoa Minisitra TINOKA Roberto narahina firariantsoa ny amin’ity taona vaovao 2021 ity.
UNFPA : FITSIDIHANA ARA-POMBAM-PANAJANA NY MINISITRY NY TANORA SY NY FANATANJAHANTENA
Tonga nitsidika ny Minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena, Andriamatoa TINOKA Roberto, ny Solontenan’ny UNFPA eto Madagasikara, Andriamatoa Koffi KOUAME sy ny ekipany androany 16 Martsa 2021. Nandritra ity fitsidihana ara-pombam-panajana ity no nanamafisana ny fiaraha-miasa misy eo amin’ny roa tonta.
Anisan’ny voaresaka nandritra ity fihaonana ity ny fanetsehana indray ny « Plateforme Jeunesse, Culture et Sports » (JCS), izay ivondronan’ireo mpiantsehatra rehetra amin’izany na miankina na tsy miankina amin’ny fanjakana.